विश्व मिर्गौला दिवस: विश्वभरमा यस्तो छ मिर्गौलाको समस्या हुनेको तथ्यांक – Halkhabar kura
२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १२:०६
विश्व मिर्गौला दिवस: विश्वभरमा यस्तो छ मिर्गौलाको समस्या हुनेको तथ्यांक
काठमाडौं । आज विश्व मिर्गाैला दिवस । मिर्गौला स्वास्थ्यको लागि विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गरि नेपालमा पनि यो दिवस मनाईदै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक वर्ष मार्च महिनाको दोस्रो बिहिबार विश्व मिर्गौला दिवस मनाउने गरेको छ । यस वर्षको दिवसको नारा ‘मिगौंला स्वास्थ्य सबैको लागि, सबै ठाउँमा–रोकथामदेखि पहिचान र उपचारसम्म समान पहुच’ भन्ने रहेको छ ।
डब्ल्युएचओका अनुसार हाल विश्वभर करिब ८५ करोड मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको मिर्गौलाको समस्या रहेको छ । हरेक १० जना वयश्कमध्ये एक जनामा मिगौंला समस्या देखिने गरेको तथ्यांक छ । दैनिक व्यायाम, स्वस्थ खानपान र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिए मिर्गौला समस्याबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरु बताउछन् । पछिल्लो समय बढिरहेको बिलासी र सुस्त जिवनशैलीले नेपालमा पनि मिर्गौला रोगीहरु बढिरहेका छन् ।
सरकारले मिर्गौला फेल भएका तथा प्रत्यारोपण गरेका विरामीलाई निशुल्क डायलासिसको घोषणा गरेपनि देशभर यो सेवा दिने अस्पतालको भने अभाव छ ।
यसकारण हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।
मिर्गौला हाम्रो शरीरको निष्कासन प्रणालीसँग सम्बन्धित अंग हो। यसले शरीरका विकारयुक्त कुरा फाल्ने, पानीको सन्तुलन मिलाउने, रातो रक्तकोष बनाउन चाहिने हर्मन उत्पादन गर्ने, ग्लुकोजको व्यवस्थापन गर्नेलगायत काम गर्छ। यो एकदमै महत्वपूर्ण अंग हो। भगवानले हरेक मानिसलाई जन्मजात दुइटा मिर्गौला दिनुभएको हुन्छ।यिनीहरू पेटको पछाडिको भागमा हुन्छन्। मिर्गौला सिमी आकारका हुन्छन्।
मिर्गौलाको रोग कसरी लाग्छ? कतिपय अवस्थामा मिर्गौलाका रोग जन्मजात हुन्छ। कोही उमेर बढ्दै जाँदा रोगी हुन्छन्। बच्चाहरूमा जन्मजात रूपमा एउटामात्रै मिर्गौला हुने, मिर्गौलाको रगतको नशा च्यापिएको वा बिग्रिएको हुने, मिर्गौलामा सिस्ट बन्नेलगायतका समस्या देखिन्छन्। पिसाब उम्लिएर गएर संक्रमण गराउने,पिसाबको थैली र नलीका रोगले पनि बच्चाको किड्नीलाई असर गरिरहेको हुन्छ।
वयष्क मान्छेमा मिर्गौलाको समस्या हुनुका प्रमुख दुई कारण उच्च रक्तचाप र मधुमेह हुन्। मिर्गौलामा रोग देखिने अन्य कारणमा मिर्गौलाको हुने पत्थरी, ट्युमर, मिर्गौलामा लाग्ने चोटपटकलगायत छन्।
मिर्गौलालाई स्वस्थ कसरी राख्ने? बेलाबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। हरेक ६ महिना/१ वर्षमा रक्तचाप, क्रियाटिन, पिसाबको परीक्षण र अल्ट्रासाउण्ड (भिडियो एक्सरे)गर्नुपर्छ। यी सबै स्क्रिनङ परीक्षण हुन्। मिर्गौलाको रोग अरू रोगजस्तो सजिलै पत्ता लाग्दैन किनभने क्रियाटिन बढ्नलाई मिर्गौला ७० देखि ८० प्रतिशत बिग्रिनुपर्छ। त्यसैले पिसाब, रगत सबैको परीक्षण गरे मिर्गौला रोगलाई सुरूकै स्टेजमा पत्ता लगाउन सकिन्छ।
Previous के तपाईलाई थाहा छ सुन्तलाको बोक्राका फाईदाहरु ? सौन्दर्यको लागि पनि उपयोगी
Next पुजा र पलको ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को तिम्रो घरको वरिपरी करोड क्लबमा